Jaadka oo la Ogaaday in uu Xanuuno Badan Dawo ka Yahay – Rasaasa News
May 14, 2010 Jaadka oo la Ogaaday in uu Xanuuno Badan Dawo ka Yahay
Waxayaalaha loo yaqaan Mukhaaradaadka oo aduunka oo dhan si wayna looga isticmaalo ayaa waxay leeyihiin faa,iidooyin iyo faa,iido daro labadaba. Dal walbana waxaa uu leeyahay nooc mukhaadaraad oo u gooniya, sida Jaadka.
Dalalka aduunka kuwa horumaray iyo kuwa dib u dhacayba, ayaa dal waliba waxaa uu leeyahay mukhaadaraad ay dadkiisu isticmaalaan oo u dhaqan ah, dhaqankaas oo aan ku xidhnayn diin.
Jaadka oo ka mid ah dalagyada aadka looga beerto bariga afrika iyo carabiya, ayaa lagu tiriyaa in uu yahay dalag mukhaadaraad ah oo dhaqan ahaan ka soo jeeda Geeska Afrika.
Jaadka oo u kala baxa laba nooc ayaa ku kala xoog badan dhinaca mirqaanka [simulation], waxana la kala yidhaahdaa Harari iyo Miiraha, waxaana xoog badan Miira.
In kasta oo aan awal hore loo aqoon in uu yahay mukhaadaraad, ayaa baadhid cilmi ah oo la sameeyey [scientific research] lagu ogaaday in uu yahay mukhaaradaar khafiif ah.
Waxayeelada Jaadka ayaa la sheegay in ay aad u yar tahay, hadii si wanaagsan loo isticmaalo. dhibaatada ugu badan ee uu keeno jaadku waa isaga oo jidhka ka dhameeya biyaha, arintaas oo keenta hurdo la,aan iyo cunto xumo oo laga yaabo in ay horseedo xanuuno kale.
Dhinaca kale Jaadka ayaa waxaa la ogaaday in uu dawo ka yahay cuduro badan sida; cudurka kaadi macaaka [ deabetic] iyo cudurada ku dhaca wanaha sida baruurta [cholesterol]. Cudurka Cholestero-ka ayaa baruur uu sameeyo beerku oo uu jidhku u baahan yahay, taas oo hadii ay dhiiga ku badato keeni karta wadna xanuun [heart attack].
Sida ay baadhidu sheegtay dadka Jaadka cuna ayaa uu aad ugu yar yahay subagu [cholesterol], kaas oo uu la dagaalamo Jaadku in uu noqdo xad dhaaf.
Cudurka kaadi-macaanka, cuntada aan cuno waxay noqotaa [glucose] sonkor taas oo uu jidhku u badasha tamar uu isticmaalo. Beeryarada [pancreas] oo ah xubin ku taal caloosha hoosteeda ayaa soo daysa dheecaamo [insulin], kaas oo caawisa in tamartu gasho unugyada jidhka.
Sida la sheegay Jaadku waxaa uu qayb ka qaataa gubida sonkorta si ay u noqoto tamar isaga oo ka qayb qaadanaya dheecaamada [insulin] ee ay soo saarto beeryaradu.
Hadii ay arintani dhab noqoto, waxaa badan doonta cunida qaadka iyo waliba cabida cabitaanada laga sameeyey Jaadka.